Suudaan: kacdoonku wuu sii socdaa inkastoo uu shaqada ka eryay Omar al-Bashir - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Suudaan: kacdoonku wuu sii socdaa inkastoo ay ka baxeen Omar al-Bashir - JeuneAfrique.com
Suudaan: kacdoonku wuu sii socdaa inkastoo ay ka baxeen Omar al-Bashir - JeuneAfrique.com
Ka dib markii lagu dhawaaqay ka saarista ee Madaxweyne Omar al-Bashir iyo abuuritaanka kala guurka ah ay maamulaan ciidanka, ka dibad Sudan, dhiirigelinayaa by dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed, sii si ay uga mudaaharaadaan, iyagoo gaala ah ballamadii ciidamada.
Ku dhawaaqista Wasiirka Difaaca, General Awad Ibn Cawf, ee lagu hayo xabsiga Cumar al-Bashiir, ma aysan qancin Suudaaniyiinta. In kasta oo ay jiraan tallaabooyin taxane ah oo la qaaday iyo ku dhawaaqidda dhismaha Golaha Xilliga Milatari, ayaa dibad-baxayaashu waxay u baxeen inay caqabad ku yimaadaan, iyaga oo ku baaqaya kala-guurka dimuqraadiyadda iyo awoodda rayidka. Waxay doonayeen inay cambaareeyaan "isku dayga militariga" si ay u qabsadaan awoodda.
>>> READ - Suudaan: Omar al-Bashir oo laga saaray by ciidanka
Taageerayaasha dhaqdhaqaaqa "Al Intifadha", oo ka soo horjeeda bilawgii kacdoonkii, ayaa cambaareeyay ku dhawaaqida Ibn Awf oo waxay dibad-baxayaashu ugu yeertay waddooyinka Khartoum "illaa iyo inta la xaqiijinayo shuruudaha sharciga ah ee dadka." Hadalka sida "IbnAwf ma matalayo" ama "maya tirooyinka nidaamka jirtana" ayaa soo kordhay tan iyo subaxnimadii on shabakadaha bulshada iyo jilayaasha dadka dibad baxayaasha ah.
Ururka dhaqdhaqaaqa Suudaan ee Suudaan, laf-dhabarta dhaqdhaqaaqa, ayaa sidoo kale cambaarey ku dhawaaqday ciidammada qalabka sida oo ugu baaqday Sudan in ay ka baxdo waddooyinka illaa "fallaagidda xukunka". Dhacdooyinka ay qabanqaabisay HBS waxay sidoo kale ka dhacday safaaradda Suudaan ee London.
Xisbiga Al Umma boggiisa Facebook, daqiiqado yar ka hor warbaahinta farriinta ciidamada, bayaan uu ku baaqay dadka in ay diidaan shakhsiyaadka ka soo jeeda xukunka dhacay. "Waxaan kuugu baaqaynaa in aad sii wadatid muujinta illaa iyo inta laga rabo xorriyaddeenna, kala-guurka dimuqraadiga iyo sharciga rayidka," ayuu qoray.
Maya Kozz Kozz
bulshada rayidka ah ayaa sii waday in ay muujiyaan ka dib markii lagu dhawaaqay oo ka mid ah ciidamada qalabka sida. ma weedho u "Kozz Kozz" (pro-Bashir), "annagu ma beddeli Kozz a by Kozz" iyo "Sudan Belac Kezan" (Sudan oo aan daalim ah) ahaayeen Xaraashyada by dibad jawaab u Ciidamada xayeysiis ciidammadooda.
Dagaallada ayaa sidoo kale ka dhacay caasimadda, intii u dhexeysay bilayska iyo mudaaharaadayaasha doonaya inay iska caabbaan ayna sii wadaan kacdoonkooda. Waxaa ka mid ah tallaabooyinka lagu dhawaaqay Maalinta Axir Awf, bandow lagu soo rogay fiidkii Khamiistii.
Suudaan, millatariga ayaa sheegaya in ay qaadatay awood
Algeria: Qalabka booliska oo muhiim u ah subaxdii 8e Jimcihii dibad baxa